Kismaayo: Wasaaradda Qorsheynta Jubbaland oo kulan u qabatay Ha’adaha samafalka - JNN24
Kismaayo: Wasaaradda Qorsheynta Jubbaland oo kulan u qabatay Ha’adaha samafalka
Wasaaradda Qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa kulan xog wareysi ah u qabatay qaar ka mid ah Hay’adaha ka shaqeeya arrimaha gar-gaarka ee ka howl-gala deegaanada Jubbaland.
U jeedada kulanka ayaa ahaa sidii gar-gaar loo gaarsiin lahaa bulshada ku dhaqan deegaanada Jubbaland iyo sidii si buuxda shaqada ay ugu soo laaban lahaayeen Hay’adihii ka howl gali jiray Jubbaland maadaama ay hakad galeen muddadii ay socotay doorashada Jubbaland.
Kulanka waxaa daahfuray Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta iyo xiriirka Caalamiga ee Jubbaland Mudane Aadan Aw Xirsi waxaana goob joog ahaa qaar kamid ah Agaasimayaaasha Wasaaradaha Jubbaland.
kulankaan ayaa ahaa kulan joogta ah oo ay Wasaaradda Qorsheynta iyo Xiriirka caalamiga ah ee Jubbaland ay la qaadato Haya’daha gar-gaarka ee ka hawlgala Jubbaland Waxaana inta badan looga hadlaa qorshaha Mustaqbalka umadda Reer Jubbaland .
The post Kismaayo: Wasaaradda Qorsheynta Jubbaland oo kulan u qabatay Ha’adaha samafalka appeared first on Jubbaland TV.
← Xarun lagu dhaqan celiyo Haweenka ka soo baxa AL shabaab oo Kismaayo laga dhagax dhigay
Xawaalad Soomaaliyeed oo ku guuleysatay Xawaaladda ugu wanaagsan Sanadkan. →